Hey DAN: Kedu ka olu ka CRM nwere ike isi mee ka mmekọrịta gị na ire ere dịkwuo mma ma mee ka ị mara mma | Martech Zone
Enwere naanị ọtụtụ nzukọ ị ga-abanye n'ime ụbọchị gị yana enweghị oge zuru ezu iji dekọọ isi ihe mmetụ ahụ bara uru. Ọbụna tupu ọrịa na-efe efe, ndị otu ahịa na ndị na-ere ahịa na-enwekarị nzukọ mpụga 9 kwa ụbọchị ma ugbu a nwere akwa akwa na ngwakọ na-arụ ọrụ maka ogologo oge, ọnụ ọgụgụ nzukọ ọgbakọ na-arị elu. Idebe ndekọ ziri ezi nke nzukọ ndị a iji hụ na a na-azụlite mmekọrịta na data kọntaktị bara uru na-abaghị uru aghọwo ọrụ na-agwụ ike na nke na-ewe oge, na nke ahụ bụ ebe olu na ngwọta CRM nwere ike ịzụta oge gị, na-akwado ọgbọ ndu ma chekwaa ike gị.
Hey DAN Voice nye onye enyemaka CRM
Olu nye onye enyemaka CRM Hey DAN na-edegharị nzukọ ma na-etinye nkọwa kọntaktị na nzute n'enweghị nsogbu n'ime ọdụ data CRM. ọkacha mmasị Fortune 500, onye enyemaka olu a na-arụ ọrụ na CRM ọ bụla, gụnyere Salesforce, MS Dynamics, na Hubspot. Ọ na-eme ka nkuchi CRM dịkwuo mma, na-abawanye ogo data karịa 200%, ma na-ebuga nkezi nke 4-6 awa kwa izu nke oge ire ere ọzọ. N'ebumnuche nke imeziwanye nghọta nke ndị ahịa na iwepụ ibu ọrụ nchịkwa, ọ nwere ọrụ ngwa yana ụkpụrụ nchekwa siri ike iji weghara ndetu nzukọ, kaadị azụmahịa, hazie nsonye na jikwaa mmefu.
Kedu ka ụda ga-esi bụrụ eziokwu CRM na Hey DAN Nkwado ndu ndu?
Ijide n'aka na a na-eme ihe nleba anya na onye kwesịrị ekwesị n'oge kwesịrị ekwesị na ndị na-ere ahịa na-eji ngwá agha nwere ọgụgụ isi ziri ezi, bụ akụkụ dị mkpa nke atụmatụ ịzụ ahịa na-aga nke ọma. Hey DANNnyocha e mere na-egosi na ọ bụrụ na onye na-ere ahịa na-echere nanị otu ụbọchị tupu ịbanye akwụkwọ ozi n'ime usoro CRM, ihe ruru 40% nke nkọwa nke njikọ ahụ na-efunahụ. Iji mee ka ndị otu na-ere ahịa nwee ike ime ihe kacha mma, iwulite ma wusie mmekọrịta bara uru, ntinye data CRM ziri ezi na nke oge dị oke mkpa. Ngwanrọ olu na CRM na-enye azịza ozugbo na nke ziri ezi.
N'ime afọ iri gara aga, ọrụ ntinye akwụkwọ maka nchekwa data CRM apụọla site na ọrụ ikike mmadụ kpam kpam gaa na ndị enyemaka roboti. N'ụzọ na-akpali mmasị, n'agbanyeghị na ha dị ọhụrụ na egwuregwu ahụ, bots ndị a nwekwara ike ị nweta ọnụego ziri ezi.
Anyị ahụla izi ezi nke CRM ka ọ na-akawanye mma n'ime afọ ole na ole gara aga, yana ọnụego njehie na-agbada site na 19% na 2019 ruo 12% na 2021. Ngwọta olu na CRM na-eji nwayọ na-emezi algọridim ha yana ndị otu nchịkọta akụkọ na-enye nlele ọzọ hụ na a na-ebelata mperi ndegharị mmepụta ihe na gburugburu 1% - nchikota ike a bụ ihe mere ụlọ ọrụ Fortune 500 ji tụkwasị anyị obi. Ịlụ nkà na ụzụ na ndị mmadụ bụ nguzozi zuru oke n'etiti ịrụ ọrụ nke ọma na ịnweta ya nke ọma.
Kate Zeid, Uto & Ọrụ SVP na Hey Dan
Enwere ike iji chekwaa oge a niile na ijide data ziri ezi iji mee nkọwa doro anya nke atụmanya ma kwado ndị otu ahịa iji nweta ụzọ zuru oke iji mechie nkwekọrịta. Data siri ike nwere ike iduga na njikọ anwansi, dị ka ịmata asymmetry ozi n'etiti ihe onye ahịa chọrọ ịmụta na ihe otu ndị na-ere ahịa maara banyere ngwaahịa. Ọ nwere ike mee ka ndị otu nwee ike ịlele otú ndu ndú si dị ọkụ ma na-etinyekwa aka n'oge kwesịrị ekwesị na n'ụzọ kacha mma. Nyocha data n'ogo nwekwara ike iduga n'ịhụ usoro mkpa ndị ahịa na-agwa agba nke ngwaahịa ma ọ bụ ọrụ na-esote.
Ụlọ Ahịa Ịga n'ihu
Ịre otu ịre ahịa nwere ike ịbụ ihe ịma aka, n'ọtụtụ ụlọ ọrụ na-ere ahịa oge ndị ọrụ nwere ike ịbụ ihe na-erughị afọ 2. N'akụkụ ijikwa isi ọwụwa nke iwere onye na-anọchi anya onye na-eme ihe siri ike, bụ obi mgbawa nke nwere ike ịla n'iyi mmekọrịta ndị ahịa nke ha wulitere ka oge na-aga yana ọnụ ahịa nwere ike ịkwụsị azụmahịa ha.
Icheta data nzuko ziri ezi na nke miri emi bụ isi ihe na-eme atụmatụ nhazi oge. Site n'ịhụ na nkọwa nke nzukọ ndị ahịa, site na ọnụọgụ ahịa enwere ike ekwenye na Zoom ruo na icheta ịkele onye guzobere ụbọchị ncheta azụmaahịa, edobere ya ozugbo na nke ọma na nchekwa data CRM ị nwetala ọdịnihu nke mmekọrịta ahụ.
At Hey DAN olu anyị na ngwanrọ CRM edepụtala ihe karịrị otu nde nzukọ, na-anọchite anya ihe karịrị nkeji 1 nke ọdịyo. Inye ebe nchekwa ụlọ ọrụ site na ịnye data smart maka otu ndị na-ere ahịa Fortune 620,000 na uwe azụmaahịa pere mpe, na-eme ka mmekọrịta na-aga n'ihu ma na-ebuli ire ere.
Ngwanrọ dakọtara CRM na-emesi obi ike, Hey DAN, nwere ike ibelata oge ịcheta nkọwapụta nke ọtụtụ nzukọ ndị mere n'ime ụbọchị siri ike. Ọ na-agbakwa ume na olu a na-agbanwe agbanwe na teknụzụ CRM na-aga n'ihu na-akawanye mma na ndekọ egwu ya dị egwu, ka algọridim na-aga n'ihu na-emechi oghere dị n'etiti ncheta mmadụ na ikike bot.
Detuo Hey DAN ngosi gị taa
Tags: CRMokpokoroHub Spot CRMNjikọ Hubspotmwekotaedu ọgbọms dynamicsms dynamics mwekotanhazi asụsụNlpotu ire ereere ahịa crmsalesforce mwekotaolu ka crmederede olu